China yakatsetseka laminated girazi fekitori uye vagadziri | LYDGLASS
Zvinoumba Laminated Glass
1.Extremely yakakwirira chengetedzo: Iyo PVB inowirirana inomira kupinda kubva mukukanganisa. Kunyangwe iyo girazi ikatsemuka, mapapiro anoomerera kune inopindirana kwete kupararira. Mukuenzanisa nemamwe marudzi egirazi, girazi rakamisikidzwa rine simba rakakwirira kwazvo kurwisa kuvhunduka, kuba, kuputika uye mabara.
Zvivakwa zvekuchengetedza magetsi zviviri
3.Gadzira yekufunga pfungwa kune zvivakwa: Laminated girazi ine tinted interlayer inozoshongedza zvivakwa uye kuwiriranisa kuoneka kwavo nekwakatenderedza maonero anosangana nechinodiwa chevakavaka.
5.Ultraviolet kuongorora: Iyo inowirirana inosefa kunze kwema ultraviolet uye inodzivirira fenicha nemaketeni kuti asadzike
Ndeipi firimu gobvu uye ruvara rwegirazi rakamisikidzwa iwe raunopa?
PVB firimu isu tinoshandisa Dupont weUSA kana Sekisui weJapan. Iyo lamination inogona kuve girazi ine isina simbi mesh, kana dombo uye nevamwe kuti vawane akanakisa maonero. Mavara eiyo firimu anosanganisira akajeka, mukaka, bhuruu, grey grey, girini yakajeka, yendarira, nezvimwe.
Kukora kwePVB: 0.38mm, 0.76mm, 1.14mm, 1.52mm, 2.28mm, 3.04mm
Kukura kweSGP: 1.52mm, 3.04mm uye saka mwanakomana
Interlayer: 1 rukoko, 2 akaturikidzana, 3 akaturikidzana uye mamwe akaturikidzana maererano nezvaunoda
Ruvara rweFirimu: Yakakwira Transparent, mukaka, bhuruu, grey grey, girini yakajeka, yendarira, nezvimwe.
Matanho: Multi matete pane chako chikumbiro.
Ndeipi gobvu uye saizi yegirazi rakamisikidzwa iwe yaunogona kupa?
Yakakurumbira gobvu regirazi rakavezwa: 6.38mm, 6.76mm, 8.38mm, 8.76mm, 10.38mm, 10.76mm, 12.38mm, 12.76mm etc.
6mm + 0.76mm + 6mm nezvimwewo, zvinogona kugadzirwa sekukumbira kwese
Yakakurumbira saizi yegirazi rakamisikidzwa:
Tinogona zvakare kugadzirisa rakakombama rakadzikama rakamisikidzwa girazi uye rakapfava rakapfava rakamisikidzwa girazi.
Pashure: Bullet chiratidzo girazi
Zvadaro: 6mm yakadzikama girazi yealuminium railing uye deck railing
10.38mm laminated girazi
6.38mm girazi rakatemwa
6.76mm laminated girazi
8.38mm laminated girazi
Laminated girazi rezvitima
Railings laminated girazi
Standard saizi laminated girazi